कसरी आनन्दित र स्मरणीय बनाउने यौन सम्बन्ध ? पूर्ण आत्मविश्वासका साथ बिस्तारै–बिस्तारै आफ्नो यौनकार्यलाई गति प्रदान गर्दै जानुहोस् !
Posted: 2017-12-14 15:53:10
डा. सुबोधकुमार पोखरेल कसरी आनन्दित र स्मरणीय बनाउने यौन सम्बन्ध यौन एक प्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनलाई लिएर कयौं किसिमका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुनु खासै नौलो कुरा होइन । केही अपवादबाहेक सबै मानिस यौनकार्यमा सहभागी हुन्छन् । कसैले विवाहपछि सेक्स गर्छन् भने कसैले विवाहअघि नै गर्छन् । हुन त हाम्रो समाज अझै पनि यौनको मामिलामा खुलेर कुरा गर्नसक्ने खालको छैन । त्यसैले गर्दा पनि हामी समाजमा यौनसम्बन्धी कुरा गर्न डराउँछौं ।
सनी लियोनीलाई आफनै ड्राइभरले सेक्सको प्रस्ताव गरे, आफ्नो फिल्मको प्रमोशनका लागि व्यस्त सनीले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने कर्ममा यस्तो खुलासा गरेकी हुन्
Posted: 2017-12-05 15:02:51
एजेन्सी पुर्व पोन स्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनीलाई आफ्नै ड्राइभरले नराम्रो म्यासेज पठाएको खुलासा गरेकी छन् । आफ्नो फिल्मको प्रमोशनका लागि व्यस्त सनीले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने कर्ममा यस्तो खुलासा गरेकी हुन् । टेलिभिजनको कार्यक्रममा फिल्मको प्रमोशनका लागि पुगेका सनी र अरबाज खानलाई सोधिएको थियो तपाई दुबैलाई अहिले सम्म कसैले नराम्रो म्यासेज पठाएको छ रु सनीले जवाफदिंदै भनिन मलाई मेरो ड्राइभरले यस्तो नराम्रो म्यासेज पठाएको थियो र उ त्यो दिन काममा समेत आएन ।...
ल हेर्नुस महिलालाई असाध्यै मनपर्ने सेक्सका पाँच आसन, व्यक्त नगरेपनि सेक्सप्रति पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी चाहा र चासो हुन एक अध्ययनले बताएका छ
Posted: 2017-12-05 15:01:00
काठमाडौं । व्यक्त नगरेपनि सेक्सप्रति पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी चाहा र चासो हुन एक अध्ययनले बताएका छन । तर सेक्सका समयमा महिलालाई मनपर्ने आसनको बारेमा पुरुषले ध्यान दिंदैनन् । सेक्स दुवैको सहमतिमा हुन्छ । तर महिलाको यौन सन्तुष्टिका बारेमा पुरुषहरुले त्यति ध्यान पुर्याएको पाइदैन । अनि यौंन जीवनमा तनाव सृजना हुन्छ । त्यसैले महिलाको सन्तुष्टि प्रति पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । आफूलाई मनपर्ने आसनलाई छोडेर महिला पुरुषले भनेकै आसनमा सेक्स गर्न बाध्य हुन्छन् । सेक्समा दुवैले चरमसुख प्राप्त गर्ने कुरा भनेको मर्ने आसन प्रमुख रहेको ...
कण्डमले पनि बचाउंन नसक्ने ४ यौनरोग यी हुन्, कण्डमलाई परिवार नियोजनका अस्थाई साधनको रुपमा प्रयोग गरिन्छ, यसले यौनसँग सम्बन्धित रोगहरुबाट बचाउछ भनेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ, तर यो थोरै मनिसलाई मात्र जानकारी होला की कण्डमले पनि बचाउन नसक्ने यौन रोगहरु छन्, ती रोगहरु लाग्यो भने बाँच्न सकिदैन
Posted: 2017-12-04 13:59:46
काठमाडौं । कण्डमलाई परिवार नियोजनका अस्थाई साधनको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले यौनसँग सम्बन्धित रोगहरुबाट बचाउछ भनेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर यो थोरै मनिसलाई मात्र जानकारी होला की कण्डमले पनि बचाउन नसक्ने यौन रोगहरु छन् । ती रोगहरु लाग्यो भने बाँच्न सकिदैन । त्यस्ता रोगहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । १ एचपीभीः यो भाईरसलाई खतरनाक भाईरसको रुपमा लिन सकिन्छ । यो भाईरस १५० भन्दा बढी सम्बन्धित भाइरसहरुको समुह हो । यो ठुलो समूहको भाईरसले पहिला छालामा मुसा जस्तो गिर्खा ...
गलफ्रेण्डवाटपनि ब्ल्याकमेलिङ ? एउटा उमेर चरणमा केटा र केटी आपसमा आकषिर्त हुन्छन्, यसरी प्रेम गरिरहेका वा प्रेमको अनुभव लिएकाहरुलाई थाहा छ, त्यसबेला रमाइलो मात्र हुँदैन, कतिपय अवस्थामा तनाव पनि हुन्छ... तालमेल हुँदैन, यसले उनीहरुमा मनमुटाव हुन्छ, झगडा हुन्छ...
Posted: 2017-12-01 10:42:11
एजेन्सी । प्रेम गर्ने कुरालाई हामीकहाँ त्यती फराकिलो आँखाले हेरिदैन । प्रेम गर्नुलाई ‘असामाजिक’ काम ठानिन्छ, खासगरी केटा र केटीबीच हुने प्रेमलाई । तर, एउटा उमेर चरणमा केटा र केटी आपसमा आकषिर्त हुन्छन् । उनीहरु एकअर्कालाई प्रेम गर्छन् । यसरी प्रेम गरिरहेका वा प्रेमको अनुभव लिएकाहरुलाई थाहा छ, त्यसबेला रमाइलो मात्र हुँदैन, कतिपय अवस्थामा तनाव पनि हुन्छ । गर्लफ्रेन्ड वा ब्वाइफ्रेन्ड भएको अवस्थामा मन बेचैन पनि हुन्छ । औडाह पनि हुन्छ । एकअर्कावीचको व्यवहार, प्रवृत्ति, मनोविज्ञान, पृष्टभूमी, सोचमा तालमेल हुँदैन । यसले उनीहरुमा मनमुटाव हुन्छ । झगडा हुन्छ ।...